Ekipa mpanonta ny Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Famoronana an-tserasera dia vondrom-piarahamonina tsara ho an'ny rehetra tia ny famolavolana sary, ny famolavolana tranonkala ary ny fampandrosoana ary ny famoronana amin'ny ankapobeny, toerana ahafahanao mizara ny fahaliananao amin'ity tontolo mahaliana ity amin'ny olona izay miaina ny fanirianao mitovy.
Raha te hampivelatra ny atinay dia manana ny Creativos Online ekipa mpitsikilo manam-pahaizana momba ny famolavolana sy ny fampandrosoana, miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro miasa amin'ny orinasa sy ny masoivoho famolavolana sy ny fampandrosoana ary miaraka amin'ny kariera mifamatotra amin'ny tontolon'ny famoronana hatrany. Noho io traikefa io, ny tranokalanay dia miavaka amin'ny iray amin'ireo kalitao avo indrindra sy miaraka atiny feno famelabelarana sy henjana kokoa amin'ireo rehetra mandrafitra ny tontolo iainana ireo tranonkala manokana ho an'ny mpamorona sy ny famoronana. Raha te hijery ireo lohahevitra rehetra atrehinay amin'ny Internet ianao, dia afaka manao izany mora foana miditra amin'ny faritra misy anay.
Ao amin'ny Creativos Online dia mitombo hatrany izahay mitady matihanina hanampy anay hampitombo ity vondrom-piarahamonina ity amin'ny famoronana atiny misy kalitao sy mahaliana. Raha te ho anisan'ny ekipanay mpanoratra ianao mila mamita ity takelaka manaraka ity fotsiny ianao ary hifandray aminao haingana araka izay tratra izahay.
Amin'ny maha mpanoratra sy tonian-dahatsoratra ahy, ny famolavolana dia ampahany amin'ny fahalalako, satria zava-dehibe ny hakanton'ireo sary ireo amin'ny fahitana. Tiako ny mizara ny fahalalana azoko amin'ny dokam-barotra sy ny famolavolana amin'ireo hafa mety mila izany.
Ho ahy, ny famolavolana sary dia fitaovana foana handikana ny hevitrao ho zava-misy sy hampiroborobo azy ireo. Noho io antony io dia nandalina ny famolavolana sary aho tao amin'ny Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) ao Castellón de la Plana, ary miasa amin'ny zavatra tiako indrindra aho izao: manao tetik'asa mifandraika amin'ny sary sy sary. Te hahay hanatsara ny tetikasanao ve ianao? Aza mitsahatra mamaky ny lahatsoratro.
Nanomboka nianatra Design Graphic tamin'ny alalan'ny asa aho, ka nanapa-kevitra ny hanao izany aho amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny mari-pahaizana momba ny Graphic Design ao amin'ny Higher School of Design any Murcia. Koa satria tadidiko daholo izay misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny zavakanto, dia nahasarika ny saiko ny famoronana sy ny famolavolana. Te hahafanta-javatra foana aho ary naniry hianatra teknika, programa ary taranja vaovao.
Fitiavana momba ny sary miaraka amin'ny fombako manokana, izaho dia Illustrator miaraka amin'ny fampianarana voaofana ao amin'ny ESDIP miaraka amin'ny diplaoman'ny Jeneraly telo taona amin'ny Cartoon, Animated ary Animation. Ny famelana ny eritreritrao hanidina sy hahazo ny valiny antenaiko dia zavatra tiako. Tena tiako ny mamolavola, ary vao mainka raha afaka mizara azy io.
Fitiavana momba ny zavakanto sy ny fahaiza-mamorona, mpamorona manery aho izay mankafy manolotra tolo-kevitra ary manandrana vahaolana vaovao ao anatin'ny tontolon'ny famoronana famoronana. Noho io antony io dia tiako ny maheno ireo hevitra sy tolo-kevitry ny hafa, ary hahazo aingam-panahy amin'ny antsipiriany izay mety mahasoa amin'ny famoronana ny volavolako manokana.
Pablo Villalba no anarako 31 taona aho ary mpamorona endrika / mpanakanto aho. Fitiavana momba ny kanto sy ny famolavolana, nanomboka ny fianarako tamin'ny tontolon'ny zavakanto aho taona vitsy lasa izay tao amin'ny Pancho Lasso Art School, teto no nahitako ny tena fitiavako an'ity sehatra ity. Nanohy ny fianarako tany amin'ny Oniversiten'i La Laguna izay nianarako ny Degree in Design. Mandalina ny mari-pahaizana master momba ny famolavolana sy ny fanavaozana ho an'ny sehatry ny fizahantany aho izao. Mihetsi-po, tsy milamina, mamorona ary te hiala amin'ireo hevitra rehetra tonga ao an-tsaiko ireo.
Izaho dia mpamokatra Audiovisual manana traikefa an-taonany maro ao amin'ity sehatra ity ary misy tetikasa maherin'ny 50 novonoina miaraka amin'ny valiny tsara. Tiako ny mizara ny zavatra niainako mba hahafahantsika rehetra miara-mianatra, satria tiako ny famolavolana sary ary ataoko bebe kokoa aza izany rehefa misy ny olona tia ahy koa. Mahaiza mamorona!
Mpamorona tranonkala sy mpamorona endrika aho, koa ny famolavolana sary dia ampahany amin'ny toetrako. Ny fankafizako azy io no asako, ka tsy misalasala mandritra ny fotoana fohy aho hampahafantatra ireo tetikasako mba hahafahan'izay maniry izany hiara-mianatra amiko.
Mpianatra ny fifandraisana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Nandritra ny diplaomako dia lasa liana tamin'ny fifandraisana an-tsary sy ny endrika sary aho. Ny fahafantarana ny fitaovana famolavolana lehibe dia nanampy ahy hitrandraka ny fahaizako mamorona sy maneho ny hevitro. Manantena aho fa hizara aminao amin'ity bilaogy ity ny zavatra sasany nianarako tato anatin'izay taona izay!
Manam-pahaizana manokana aho ary tiako amin'ny Design Graphic. Tena tiako ny zavakanto, ny sary ary ny tontolo audiovisual. Ny manonofy, mamorona ary mahita ny tetik'asa tsirairay dia mivoatra dia zavatra tiako indrindra ary feno rehareha ahy. Raha misy ny olana dia mitady vahaolana foana aho mba hahatonga ny famolavolana farany tonga lafatra.
Tiako ny famolavolana sary, indrindra ny famolavolana glyph sy icon, ary ny filalaovana fandaharana amin'ny fanovana amin'ny fotoana malalaka. Ampianarina aho, dia mikaroka isan'andro fomba vaovao hanatanterahana tetikasa, ary hanatsarana ireo efa vitako, ary manao ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaim-poana aho, satria maro ny programa fampiasana maimaimpoana ahafahana mamorona endrika tsy mampino.
Mpamorona sary, mpanao sary ary mpanazatra asa aho, liana amin'ny Design sy Visual Art ary ny fampiharana azy amin'ny sehatra hafa toy ny Social Design, Advertising, na ao anatin'ny tontolon'ny kolontsaina tanteraka. Tiako ny hampanakaiky kokoa ny tontolon'ny famolavolana amin'ny besinimaro, hampahafantatra ireo mpamorona endrika sy mpanao sary avant-garde amin'ny fotoana rehetra.
Mpamorona sary sy nahazo diplaoma amin'ny Jeografia. Nampiofana ho mpamorona sary aho amin'ny famitana diplaoma ambony amin'ny famolavolana sy fanovana ireo boky vita pirinty sy haino aman-jery ao amin'ny Salesianos de Sarriá (Barcelona). Mino aho fa mbola tsy nifarana ny fiofanako amin'ity faritra ity, ka dia manazatra irery aho amin'ny alalàn'ny fampianarana an-tserasera sy atrikasa mivantana. Zava-dehibe ny fanazaran-tena isan'andro satria miaina amin'ny tontolo miovaova tsy tapaka isika, izay misy ny teknolojia mivoatra haingana. Ho fanampin'ny famolavolana dia tiako ny maka sary sy maka maodely amin'ny 3D mba hahazoana famoahana fotorealista, faritra iray natokana hianarako samirery.
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanovana sary, horonan-tsary ary fanovana sary mihetsika aho. Liana amin'ny sangan'asa famolavolana sary ihany koa aho, ary koa ny famokarana atiny misy sary sy audiovisual, ary mampiasa ny Adobe Audition hanovana mozika, feo ary feo koa aho. Tiako ny fiaraha-miasa, manavao ary manavao, izany no ahalalako ny fivoarana farany mitranga manodidina ny Design Graphic.
Mpamolavola sary aho, ary mazoto amin'ny asako, ny volavola, ny fitantanana loko ary ny fotoana rehetra ahafahana mamorona sehatra samihafa. Nandritra ny zavatra niainako dia niasa tamin'ny mpanonta ka hatramin'ny masoivohon'ny dokam-barotra aho, miaraka amin'ireo mpaka sary, mpandrindra ny varotra ary serivisy ho an'ny mpanjifa mivantana, izay ampahany mavitrika amin'ny dingan'ny famoronana sy famokarana. Amin'ny maha-matihanina ahy dia manohy manitatra ny fahalalako sy ny zavatra niainako aho, mifantoka amin'ny hatsarana sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.